Sagal Radio Services • News Report • January 14, 2017
Jawaahir Axmed Cilmi oo noqotay haweeneydii labaad oo ku guuleysatay Aqalka sare
C/waaxid Cilmi Goonjeex oo ku guuleystay kursigii 7aad ee xubnaha Aqalka sare ee Galmudug
Ra’iisul Wasaare kuxigeenkii hore ee Soomaaliya C/waaxid Cilmi Goonjeex ayaa ku guuleystay Kursiga 7aad ee xubnaha Aqalka sare u matalaya maamulka Galmudug.
Iska hor imaad sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Cadaado
Wararka ka imaanaya degmada Cadaado oo xarun KMG u ah Maamulka Galmudug ayaa sheegaya saddex ruux ay ku geeriyootay, shan kalena ku dhaawacmeen dagaal u dhaxeeyay labo ciidan.
Baarlamaanka Galmudug oo wax ka bedelay qodob dastuuri oo u ogolaanaya xil ka qaadista Madaxweynaha
Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug oo shalay shir ku yeeshay degmada Cadaado oo ah xaruntooda KMG ayaa wax ka bedel ku sameeyay qodob ka mid ah dastuurka maamulkaas, kaasoo ku saabsan xil ka qaadista Madaxweynaha Galmudug C/kariin Guuleed iyo Guddoonka Baarlamaanka.
Deg Deg:- Axmed Madoobe oo Galmudug lagu soo dhaweeyay
Madaxweynaha Maamulm Goboleedka Soomaaliyeed Ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa goor dhaw tagay Magaalada Cadaado oo Xarun KMG ah u ah Maamulka Galmudug.
Dibadbax ka dhan ah Al-shabaab oo ka dhacay magaalada Cadaado (Sawirro)
Dibad baxani oo ahaa mid aad u balaaran ayaa lagu taageerayay Horumarka iyo Guulaha Ciidamada Dowlad Gobaleedka Galmudug ka gaareen dagaalkii dhawaan Al-shabaab uga saareen Deegaanka Camaara.
Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed oo gaaray magaalada Cadaado(Sawiro)
Taliyaha ciidanka Boliiska Soomaaliyeed sareeyo gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo ay wehliyaan saraakiil kale oo saaka safar dhulka ah uga soo ambabaxay magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa magaalada Cadaado ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada iyo madaxda dawlad goboleedka Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug oo ku dhawaaqay qorshe maamulkiisa uu isugu dhafayo ciidamada
Sagal Radio Services • News Report • July 12, 2015
Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in maamulkiisa uu wado qorshe la isugu dhafayo Ciidamada ku sugan Gobollada Dhexe, si amniga deegaanada loo xoojiyo.
Halkan ka aqriso liiska mudanayaasha baarlamaanka maamulka Galmudug oo la dhamaystirey
Doorashada madaxweynaha maamulka cusub ee Galmudug oo lagu wado in toddobaadka soo socdo ay ka dhacdo magaalada Cadaado lana doortay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug ayaa haatan la soo dhamaystirey xubnaha xildhiaannada Baarlamaanka maamulkaas.
Wararkii ugu dambeeyey ee ololaha Musharaxiinta madaxweynaha Galmudug
Magaaladda Cadaado oo uu ka soconayo dhismaha maamulka gobolladda dhexe ayaa waxaa ka socda olole xoog leh oo ay wadaan musharaxiinta u tartameysa xilka madaxweynimo ee dowlad gobolleedka Galmudug.
Sagal Radio Services • News Report • June 27, 2015
DEG DEG: Cali Gacal Casir oo ku guuleystay doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug
Cali Gacal Casir ayaa ku guuleystay doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug, kadib markii wareegii labaad uu ka guuleystay musharaxii kale ee la tartamayay C/llaahi Aasparo.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo saaka ku sii jeeda degmada Cadaado
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa saaka ku sii jeeda degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud, halkaasoo ay ka socoto howlaha maamul u sameynta Gobollada Dhexe ee Soomaaliya.
Gudigga Farsamadda Maamul u sameynta gobollada dhexe ee Somalia ayaa goor-dhow Shaaciyay 60-xildhibaan oo ka mid ah Golaha Xildhibaannada ee uu maamulkan yeelanayo.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan weerar Ismiidaamin ah oo saaka ka dhacay Magaalada Cadaado
Warar dheeri ayaa kasoo baxaya weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsady gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo Subaxnimadii hore ee Saakay lagu qaaday xarunta ay degan yihiin ergada ka qeyb-qaadaneysa shirweynaha Cadaado.
Ergooyinka shirka Cadaado oo eedeeyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Guddiga farsamada
Qaar ka mid ah Ergooyinka shirka ka socda degmada Cadaado ayaa ku eedeeyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Guddiga Farsamada inay marin habaabin ku hayaan shirka Maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud.
Odayaal ku shiray magaalada Cadaado oo eedeeyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha
Xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka ee ku xareysan xarunta Kafaalo ee degmada Cadaado, kana mid ah odayaasha beelaha gobollada Mudug iyo Galguduud ayaa waxa ay ku eedeeyeen wasaaardda arrimaha gudaha iyo federaalka inay fara gelin qaawan ku heyso habka wax qeybsiga beelaha gaar ahaan iyadoo wasaaraddu si aan sharci aheyn u bedeshay xubno odayaal ah oo horay u xareysnaa.
Maxuu Salka ku hayaa Khilaafka Shirka Maamul u sameynta Gobolada Dhexe?”Warbixin”
Maalmahaan Magaalada Cadaado oo laga furay shirka Maamul u samaynta Gobolada dhexe waxay marti gelineysey shirar kala Gooni gooni ah oo Khilaaf wata kuwaas oo qaar lagu taageerayo qaabka wax u socdaan kuwana looga soo horjeedo waxaana muuqata in talaabadii koowaad ee shirka lagu kala boodey inkastoo Khilaafka iyo wax kala jiidashu Caado ka noqotey Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo ka warbixiyay go’aano ka soo baxay shir wadatashi ka socday Cadaado
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) oo hogaaminayay Wafdi Wasiiro ahaa oo muddooyinkan ku sugnaa magaalada Cadaado ayaa ka warbixiyay go’aano ka soo baxay shirka maamul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Shirkii Maamul u sameynta Gobollada Dhexe oo goor dhow ka furmay Cadaado
War goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in shirkii Maamul u sameynta Gobollada Dhexe uu goor dhow ka furmay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Is mari waa ka taagan Furitaanka Shirka Maamul u sameynta G/Dhaxe iyo Reer Cadaado oo Waji cusub lasoo baxay
Waxaa Maanta la filayay in Magaalada Cadaado uu si rasmi ah uga furmo shirka maamulka loogu sameenayo Gobolada Dhaxe ee Dalka Soomaaliya , waxaana Magaaladaasi kasocda kulamo gaar gaar ah uu Madaxweynaha la leeyahay waxgarad iyo Siyaasiyiin.
Madaxweynaha oo la filayo in maanta uu booqasho ku tago degmada Cadaado
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu wadaa inay booqasho ku tagaan degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud, halkaasoo ah goobta lagu qaban doono shirka maamul u sameynta Gobollada Dhexe.
Diyaar garowga shirka maamul u sameynta Gobollada Dhexe oo Cadaado ka socota
Wararka ka imaanaya degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in diyaar garowga shirka maamul u sameynta Gobolada Dhexe ay ka socoto degmadaas, iyadoo wafdi ka socda dowladda oo uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha ay ku sugan yihiin.
Dib u dhac ku yimid Shirka Maamul u sameynta Gobolada Dhexe
Iyadoo lagu waday in Maanta oo sabti ah Magaalada Cadaado ee Xarunta Maamulka Ximan iyo Xeeb uu ka furmo Shirka Maamul u sameynta Gobolada Dhexe ee Dalka Soomaaliya ayaa waxaa uu dib u dhac ku yimid Qabsoomida Shirkaasi.
Maamulka Ximan iyo Xeeb oo ka soo horjeestay go’aanka Madaxweynaha
Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa ka soo horjeestay go’aanka Madaxweynaha uu ku magacaabay in Caasimada Maamulka Gobolada Dhexe ay noqoto Dhuusa Mareeb, iyadoo Maamulku sheegay inuu war cad ka soo saari doonaan.
Maamulka Ximan iyo Xeeb oo ku dhawaaqay in maalinta berri uu Cadaado ka furmayo shirka maamul u sameynta
Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa ku dhawaaqay in maalinta berri oo taariikhdu tahay 1-da April uu ka furmayo magaalada Cadaado shirka maamul u sameynta ee Gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Cabdi Qeybdiid “Maalmaha soo socda shirkii maamul u sameynta Cadaado ayuu ka furmayaa”
Madaxweynaha Maamulka Galmudug ahna musharax Madaxweyne Maamulka Mudug iyo Galgaduud Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid) ayaa gaaray magaalada Cadaado, isagoo ka dhawaajiyay inuu dhowaan ka furmi doono shirka maamul u sameynta Gobolada Dhexe.
Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa sheegay inay diyaariyeen gogoshii shirka Maamulka Gobolada Dhexe, kaasoo lagu wado in dhamaadka bishan Janaayo uu si rasmi ah uga furmo magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.
Daawo Sawiradda:Sida loo soo dhaweeeyay Madaxweynaha Galmudug oo Gaaray Cadaado
Madxweynaha Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud, iyadoo ay la socdaan xubno maamulkiisa ka tirsan.